राजधानीमै भोको पेट सडकमा निस्किन थाले मजदूर, सरकार कहाँ छ ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/राजधानीमै भोको पेट सडकमा निस्किन थाले मजदूर, सरकार कहाँ छ ?
काठमाण्डु – ‘काम छैन, रोगले भन्दा पनि भो’कले म’र्ने भइसक्यो । भारी बोक्छु’, रत्नपार्कमा धादिङ घर भएका गणेशबहादुर नेपालीले रुँ’दै मिडियाका अगाडि आफ्नो बेदना पोखे । उनले काम नपाएपछि पेटमा बाँधेको नाम्लो देखाउँदै भने ‘नाम्लो यहाँ छ । कोठाबाट घरबेटीले भाडा ति’र्न नसकेर निकाल्दी हाल्यो । ४५ सय भाडा छ ।’ उनले सडकमा खाना खान थालेको तीन महिना भयो ।
उनी अहिले कालीमाटीको सडकपेटीमा बस्दै आएका छन् । यी मजदूर त एक प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन । काठमाण्डु उपत्यकामा ज्याला मजदूरी गरेर पेट पाल्ने म’जदूरहरुको संख्या ठूलो संख्यामा रहेको छ । भो’को पेटसहित काम नपाएका म’जदूरहरु अहिले सडकमा आउन थालेका छन् ।
नायक पल शाहले रोजागरी गु’माएर विचल्लीमा परेकाहरुलाई टुँडिखेलमा खाना खुवाएका छन्। उनले एक बालकलाई खाना खुवाउँदै भनेका छन्, ‘सानो भाई अंकितको मुहारमा एक दिनको लागि भए पनि हाँसो ल्याउन सके जस्तो लाग्छ मलाई । यसरि नै सबैको मुहारमा सधै भरि खुशी देख्न मन छ ।’ सरकारले को’रोना भा’इरसको सं’क्रमणसँगै चैत ११ गतेदेखिको जारी लकडाउन आंशिक रुपमा अझै पनि जारी छ ।
सरकारले साउन ६ गते लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरे पनि जिल्लागत रुपमा लक डाउन जारी छ । लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला म’जदूरी गर्ने, सडक व्यापार गर्नेहरु बढीजसो मा’रमा परेका छन् । प्रधनामन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोही भो’को पेट बस्नुन पर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो हालको अवस्था विल्कुलै छैन् ।
प्रधानमन्त्रीले आइतबार निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यावसायीहरसँगको भेटमा नेपाली जनता कसैलाई भोकै बस्न नदिन सरकार लागिपरेको बताउँदै गर्दा नेपालकै राजधानी काठमाण्डुमा दैनिक ज्याला म’जदूरी गरेर खाने म’जदूरहरुले सडकमा भोकै बसिरहेका थिए। ‘नेपाल मा काम गरेर खान स’मस्या छैन् । भौतिक श्रम गर्न विदेश जाने कुरामा अब खासै आकर्षण छैन । युवाहरू देशभित्र क्रियाशील हुनूस’, प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।
सरकारले बिना तयारी लकडाउन गर्दा विशेषगरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर पेट पाल्नेहरु मारमा परेका छन्। दैनिक मजदुरी गरेर पेट पाल्ने मजदूरहरुलाई सरकारले राहतको प्याकेज नल्याउँदा भोको पेट बस्न बाध्य छन। दाताहरुले रोजगारी गु’माएकाहरुलाई टुँडि खेलमा खाना खुवाउँदै आएका छन् । तर, उनीहरुको यो एक्लो प्रयास पनि सार्थक नहुने देखिएको छ ।
काठमाण्डु उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरुले सडकमा देखिएका भो’का म’जदूरको विषयमा चासो नदिँदा थप समस्या देखिएको छ । काठमाण्डु महानगर पालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषय नभएको भन्दै उक्त विषयबाट पन्छिन खोजिन् । उनले मजदुरको विषय मात्र पूर्ण नहुने बताइन् । उपमेयर खड्गीले घर हुनेहरुले पनि राहत खोज्ने भएकाले थप स’मस्या देखिएको बताइन् ।
उनले काठमाण्डु उपत्यका नगरपालिका फोरमको हातमा यो अधिकार हुने भन्दै उपमेयरले आफूले केही गर्न नसक्ने बताइन् । उनले काठमाण्डु महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य को’रोना सं’क्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेकाले यस्ता म’जदूरका लागि राहत प्याकेज ल्याउन थप स’मस्या भएको बताइन ।
‘सरकारको लकडाउने म’जदूर वर्ग मारमा परेका छन् । घर हुनेलाई त समस्या आइसक्यो’, उनले भनिन्, ‘रोगभन्दा भोको पेट धेरै ख’तरा हुन्छ । यस विषयमा मैले आवश्यक पहल कदमी गर्ने छु । दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर पेट पाल्नेहरुका लागि महानगरले केही राहतको प्याकेज ल्याउँछ ।’